စတွေးတွေးချင်းမှာကို… ပြုံးမိတယ်.. ပြောဖြစ်တဲ့ စကားလုံးက… မမြစိမ်းတော့ အသိုက်ပြောင်းရပြီ...
ကျမ ဒီကိုစရောက်စက ကျောပိုးအိတ်တစ်လုံးနဲ့ ဟိုသွားလိုက် ဒီသွားလိုက်.. မမဆုရဲ့ အခန်းကလေးက ကျမအတွက် တစ်ထောက်နားခိုရာ....
ကျမ အစဦးဆုံးနေရတဲ့ အခန်းကလေးက ခုတင်ရယ် ဗီရိုတစ်လုံးရယ် ဒါပဲ… ကျမရဲ့ ခုတင်ဘေးက ပြတင်းပေါက်ကနေ ကြည့်လိုက်ရင် ကောင်းကင်က လကွေးကွေးလေးကို မြင်ရတတ်တယ်.. ချစ်စရာ အခန်းကလေး.. အတူတူ နေရတဲ့ သူငယ်ချင်းလေးက ချစ်ဖို့ကောင်းလှတယ်.. သူမ ပြန်သွားတဲ့အခါ ကျမ တစ်ယောက်တည်း နေခဲ့ရတယ်.. ဒီအခန်းက ညဦးမှာသာ လရောင်နဲ့ နွေးထွေးသလောက်.. မနက်ခင်းပိုင်းတွေမှာတော့ ပြူတင်းပေါက်က ဝင်လာတဲ့နေရောင်က ကျောကို မီးစနဲ့ထိုးနေသလိုကို ပူပြင်းတယ်.. ဒါပေမဲ့ ကျမအတွက်ကတော့ အေးဆေးပါ.. ခုတင်ပေါ် နေရောင်ထိုးလာရင် ကိုယ်ကို စောင်နဲ့ပတ်ပီး ခုတင်အောက်ကို လှိမ့်ချလိုက်တယ်.. အောက်မှာ ဆက်အိပ်… အောက်က ကြမ်းပြင်က လျှာထိုးကြမ်းခင်း..
အဲ့ဒီ အစပထမဦး အခန်းကလေးမှာ ကျမ မိုးရာသီနဲ့ ဆောင်းရာသီ နေခဲ့တယ်.. နွေရာသီအစဦးမှာတုန်းကတော့ အဲ့ဒီ အခန်းကလေးက နေချင့်စရာ… နောက်တော့ တစ်စတစ်စ ပူပြင်းလာတဲ့ နွေရာသီက မုန်းစရာကောင်းလောက်အောင် သွေ့ခြောက်လာခဲ့တယ်.. အဲ့ဒီအခန်းကလေးမှာ ရာသီတစ်စက်ဝန်းလောက် ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေခဲ့တယ်.. အဲ့ဒီအခန်းကလေးအကြောင်း ပြန်တွေးတိုင်း သတိရမိတာက ကျမရဲ့ အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်းလေး G ရယ် ကျမရဲ့အချစ်ဆုံးသူ N ရယ်ပေါ့.. ဘယ်တော့မှ မမေ့တော့မယ့် ချစ်ရသူနှစ်ယောက်.. နောက်တော့ အဲ့ဒီအခန်းကလေးကနေ ပြောင်းခဲ့တယ်….
ကျမ ခရီးသွားတိုင်း ကျမ အမြဲတည်းရတဲ့ အခန်းကလေးအကြောင်းကလဲ ထားခဲ့လို့ မရ.. အဲ့ဒီအခန်းက ဘာသိဘာသာ ရှိလှတယ်.. ကျမကို နွေးနွေးထွေးထွေး မကြိုဆိုတတ်.... အိပ်တဲ့အချိန် တစ်ခုသာ ကျမက အခန်းကလေးထဲ ဝင်တယ်… အဲ့ဒီအခန်းရဲ့ ပန်ကာသံက ညဘက်တွေဆို တဒီးဒီးနဲ့ မုန်းစရာ.. မဖွင့်ထားပြန်ရန်ရင်လဲ ပေါင်းအိုးထဲ ထည့်ပြုတ်ထားသလို ပူပူလောင်လောင်.. နွေးထွေးတယ်လို့ မခံစားရတဲ့ အခန်းကလေး.. အဲ့ဒီကိုရောက်ရင် ကျမ ပြန်ရဖို့ကိုပဲ ရက်ကို ရေတွက်နေမိတဲ့အထိ..
အခန်းကို မချစ်ခင်သလောက် အဲ့ဒီနေရာက လူတွေကိုတော့ ကျမ ချစ်တယ်.. ကျမ စိတ်ကြိုက်ဟင်းတွေကို ချက်ကျွေးတတ်တဲ့ ကျမရဲ့ အမ TD ရယ်.. ကျမ ဆိုးသမျှ ခံရတဲ့ ကျမ အကိုတွေရယ်.. ကျမရဲ့ သောက်ဖော်သောက်ဖက်တွေရယ်.. အဲ့ဒီမှာ နေရတဲ့ရက်တွေမှာ ကျမ စားချင်တဲ့ မြန်မာအစားအစာတွေ စားရသလို.. ကျမ အရမ်းကြိုက်တဲ့ လက်ဖက်ရည်ချိုစိမ့် သောက်ခွင့်လဲရတယ်.. ဒါပေမဲ့ ကျမကတော့ ပြန်ရပီဆိုတာနဲ့ ကျောပိုးအိတ်ကို ကောက်လွယ် .. လက်နှစ်ဘက်ကို နောက်ပြန်လွှဲပီး နှုတ်ဆက်.. ကမန်းကတန်း ခပ်သုတ်သုတ် ပြန်လေ့ရှိတယ်..
ဧည့်သည်ဆိုတဲ့ စိမ်းသက်တဲ့ ခံစားချက်ကို တခါတလေပေးလေ့ရှိတဲ့ အဲ့ဒီ အခန်းငယ်ကလေးကလဲ ကျမနဲ့ အခုအထိ ခွဲလို့ မရသေး...
အခု ကျမ နေနေတဲ့ ရုံးရဲ့ အခန်းကလေးကတော့ ဟိတ်ဟန်ကြီးလှတယ်.. ပီးတော့ စတွေ့တွေ့ချင်းတုန်းကဆို သူစိမ်းတစ်ယောက်လို ဟန်ပန်ကလဲ များလှသေး.. အခန်းကလေးရဲ့ ပြီးပြည့်စုံမှုက ကျမကို သူစ်ိမ်းဆန်ဆန်.. ဒါပေမဲ့ ဘယ်တုန်းကမှ ကျမကို အေးအေးစက်စက် မကြိုဆိုဖူးခဲ့တာကို တွေးမိတိုင်း ဒီအခန်းကလေးကို ချစ်လှတယ်.. ဘေးဘက်မှာက သံပန်းတွေ ကာထားတဲ့ ဝရန်တာရှိတယ်.. အဲ့ဒီဝရန်တာကနေ ငေးကြည့်ရင် ဘေးကအိမ်ရဲ့ ပန်းပင်တွေကို ကြည့်လို့ရတယ်.. ပီးတော့ ရှားရှားပါးပါး ဝရန်တာလေးကနေ ကြည့်ရင် တော်တော်ဝေးဝေးအထိ အထပ်မြင့်တိုက်တွေ ရှိမနေတဲ့အတွက် ကောင်းကင်ပြင်ကို မလွတ်မလပ်သံပန်းကြားက ငေးကြည့်ခွင့်ရတယ်…
မနက် ရုံးတက်ရုံးဆင်းကို မုန်းလှတာမို့ ရုံးက အခန်းကလေးမှာပဲ နေလေ့ရှိတာကနေ မမဆုရဲ့ အခန်းဆီကို မပြန်ဖြစ်.. ရံဖန်ရံခါမှသာ မမဆုဆီ သွားနေတတ်တယ်.. မုန့်ချက်ထားတဲ့အချိန်ရယ် ထမင်းနဲ့ဟင်းနဲ့ ကောင်းကောင်းချက်တဲ့အချိန်တွေရယ်ပါ.. သူမဆီ ရောက်ပီးရင်လဲ အချိန်တန်ရင် အခန်းကလေးဆီသာ ပြန်ချင်နေတော့တာ.. ဒီအခန်းကလေးကသာ ကျမအတွက် သီးသန့် အခန်းကလေးကိုး..
အခန်းကလေးက ကျမတစ်ယောက်စာထက်မက ကျယ်ကျယ်လွင့်လွင့်.. တကယ်တော့ အခန်းကြီးကြီးပါ.. ပီးတော့ လုံလုံခြုံခြုံ .. တစ်ယောက်တည်းနေရတာဆိုပေမဲ့ နွေးနွေးထွေးထွေး.. ကျမနဲ့ တစ်သားတည်း .. သူလဲ တစ်ယောက်တည်း အထီးကျန်.. ကျမလဲ အထီးကျန်.. အေးစက်စက် ဖြစ်မနေခဲ့တဲ့ အခန်းလေး.. ခရီးသွားပီး ပြန်လာလို့ ရည်နည်းနည်းကြာသွားရင် အနည်းငယ် စိတ်ကောက်ချင်သယောင် အခန်းကို ပူလောင်လောင်ဖြစ်အောင် လုပ်ထားတတ်သေးတယ်..
ကျမ အခန်းကလေးက ကျမ ရှိမနေရင် ဘယ်သူမှ နေလို့ မရတတ်.. သူများတွေ အပြောအရတော့ အနည်းငယ်စိုးရွံ့စရာ ဘာမှန်းမသိတဲ့ အရာတစ်ခုခုရှိနေသတဲ့.. ဒီလိုအပြောနဲ့ပဲ ကျမအခန်းမှာ ကျမ ရှိမနေရင် ဘယ်သူမှမနေရဲကြ.. ကျမကတော့ နှုတ်ခမ်းအစုံကို တွန့်ကွေးပြီးကို ပြုံးလိုက်မိတယ်.. အို အဲ့ဒီတစ်ခုခုရှိနေလို့ ကျမ မကြောက်တာပေါ့လို့.. ကျမအတွက်ကတော့ တစ်ယောက်တည်းဖြစ်နေတာ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အရပေါ့.. မကြောက်ပါဘူး.. ဒါပေမဲ့ စိတ်အတွင်းပိုင်းမှာ အထီးကျန်ဖြစ်လာမှာကိုသာ အရမ်းကြောက်မိတယ်.. တစ်ကောင်တည်းကွ ဒါပေမဲ့ ကြွက်.. :P
ကျမရဲ့အခန်းကလေးထဲက ဘာမှန်းမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က ခုတင်ပေါ်မှာအိပ်နေတဲ့သူတွေကို ဂုတ်ခွစီးတတ်သတဲ့.. ရင်ဘတ်ကို ဖိထားပီး ဒီမှာ မအိပ်နဲ့လို့လဲ မောင်းထုတ်တတ်သတဲ့.. ကျမအခန်းမှာ ခနနားနေတဲ့ အဖော် ကောင်မလေးက ကျမ အပြင်က ပြန်လာတဲ့အချိန်မှာ သူမ မျက်နှာမှာ သွေးမရှိတော့.. သူမ အိပ်နေတာကို လည်ပင်းညှစ်ပီး သူမကိုထွက်သွားလို့ မောင်းထုတ်သတဲ့လေ.. မကြောက်ပါနဲ့ ငါတော့ ဘာမှ မဖြစ်ပါဘူးပြောတော့ သူမက တွေတွေဝေဝေ.. နှလုံးအားနည်းလို့ ဖြစ်မှာပါ.. ဒီတစ်ခါ ငါ မရှိရင် အခန်းထဲ ဝင်မအိပ်နဲ့ ငါပြန်လာမှ အိပ်ပေါ့…
ဒီကိစ္စက ဒီနေရာမှာတင် အဆုံးမသတ်ခဲ့.. ဒီကို ခနအလည်လာတဲ့ ဧည့်သည်က မိန်းခလေးမို့ ကျမအခန်းမှာ ခန လာနေတဲ့အချိန်.. သူမက မိန်းခလေးပီပီ နူးနူးညံ့ညံ့.. မအိပ်ခင် ဘုရားရှိခိုး အမျှဝေ မေတ္တာပို့.. သူမက အရင်အိပ်ပီး ကျမကတော့ ထုံးစံအတိုင်း မီးမှိတ်ပေးထားပေမဲ့ ကွန်ပျူတာနဲ့ ကျမနဲ့က တဂျောက်ဂျောက် တဂျက်ဂျက်.. အိပ်တော့မယ်ဆိုပီး ခုတင်ပေါ်လှဲတဲ့အချိန်မှာပဲ ဧည့်သည် မိန်းခလေးက ဝူးဝူးဝါးဝါး ထအော်တော့ ကျမ လန့်သွားတယ်.. သူမကို လှုပ်နှိုးတော့ သူမက အလန့်တကြားနိုးလာခဲ့တယ်.. ရေတိုက်ဖို့ အိမ်အောက်ထပ်ကို ဆင်းဖို့တောင် သူမက ကျမလက်ကို အားကိုးတကြီးဆွဲကိုင်ထားခဲ့တယ်… သူမကို လည်ပင်းညှစ်သတဲ့.. ဘုရားရေ.. မကြောက်နဲ့ဆိုပီး ကျမက သူမကို နေရာလဲပေးလိုက်ပီး သူမနေရာမှာ ကျမ အသာလှဲပီး အိပ်လိုက်တယ်.. ငါ့ကိုတော့ လည်ပင်းညှစ်ရင် အလန့်တကြားတော့ မလုပ်နဲ့ အသေသာ ညှစ်လို့ စိတ်ထဲက စနောက်လိုက်မိသေးတယ်.. ဘာမှမဖြစ်..
သူတို့ကပဲ အကြောက်ပိုသလား.. ကျမကပဲ အကြောက်လိုနေသလား မသိပါ.. ကျမရဲ့ အခန်းကလေးနဲ့ ကျမကတော့ အတွဲညီနေဆဲ..
အဲ့ဒီနေ့ကပေါ့.. အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်လေးက သူရှိနေကြောင်း ကျမကို အသိပေးတဲ့နေ့ပေါ့.. ကျမက စာဖတ်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် ရုပ်ရှင်ကြည့်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် စိတ်ဝင်တစား ငြိမ်ငြိမ်ဆိတ်ဆိတ် ကြည့်တတ်တယ်.. အွန်လိုင်းကနေ ကိုရီးယား ဒရာမာကားကို ငြိမ်ငြိမ်ဆိတ်ဆိတ်ကြည့်နေမိတယ်… ဇာတ်ကားထဲက သရုပ်ဆောင်တွေက အပိုအလိုမရှိ ကွက်တိ သရုပ်ဆောင်နေခဲ့တယ်.. သုံးပွင့်ဆိုင်ဇာတ်လမ်းလေး.. ချစ်ခွင့်နဲ့ ဝေးခဲ့ပေမဲ့ ချစ်ခြင်းတွေ ပြည့်လျှံနေတဲ့ မိန်းခလေးရဲ့ အနစ်နာခံ စွန့်လွှတ်မှုတွေကို အသက်မရှုစတမ်း ကြည့်နေရင်း နားထဲမှာ အသက်ရှုသံပြင်းပြင်းတစ်ခု.. ပီးတော့ နွေးနွေးထွေးထွေး.. ကျမရဲ့ လည်ကုပ်နားလောက်ဆီက..
ရုတ်တရက် ကြားလိုက်ရတဲ့ အသံကို ကျမက ကိုယ့်အသက်ရှုသံ အောက်မေ့နေခဲ့တယ်.. ဒါပေမဲ့ ကျမရဲ့ အသက်ရှုသံက တိုးလှတယ်.. ပီးတော့ အသက်ပြင်းပြင်းရှုရင် အသက်ရှုကျပ်လာပီး ဘယ်ဘက်နှလုံးက ထိုးအောင့်တတ်တယ်.. ဒီတော့ ဒီအသက်ရှုသံက ကျမဆီက မဟုတ်ဘူး.. ဒါဆို ဘယ်သူ့ဆီကလဲ.. မျက်နှာက ချက်ချင်းပြုံးစိစိဖြစ်သွားပီး ဇာတ်လမ်းကို အသံခန တိတ်ထားလိုက်တယ်.. လှုပ်လှုပ်ရှားရှားလုပ်လိုက်တော့ အသက်ရှုသံ မကြားရတော့ဘူး.. ဒါပေမဲ့ ခနချင်းမှာကို အဲ့ဒီအသက်ရှုသံက ကျမဘေးမှာ.. ကျမ သိလိုက်ပီ.. ကျမဘေးမှာ တစ်ယောက်ယောက် ရှိနေခဲ့ပီ.. စိတ်ထဲမှာ မကြောက်သွားဘဲ.. ကျမက မော်နီတာရှေ့ကနေ ဘေးကို နည်းနည်း ဖယ်ပေးလိုက်တယ်.. ပီးတော့ လှမ်းပြောလိုက်သေးတယ်.. မြင်ရလား မမြင်ရလဲ ငါ့ဘက်တိုးကြည့်ဟေ့.. သူ ရုပ်ရှင်တူတူ လာကြည့်နေတာလေ..
မနက်ကျတော့ ကျမရဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကို ပြောပြလိုက်တယ်.. ငါ့ဘေးမှာ အသက်ရှုသံ ကြားရတယ်ဟေ့ ဆိုတော့ သရဲခြောက်ပါတယ်ဆိုတာက အတည်ဖြစ်သွားတော့တယ်.. ဒါပေမဲ့ ငါ မကြောက်ဘူးကွလို့.. တကယ်လဲ ကျမ မကြောက်လှပါ.. ညဘက် ကျမ အပြင်ထွက်ပီး ပြန်လာရင် အိမ်တစ်အိမ်လုံးက တိတ်ဆိတ် ခြောက်ကပ်.. ကမန်းကတန်း တံခါးတွေ သော့ခတ်ပီးရင် ကျမရဲ့ အခန်းလေးထဲ မြန်မြန်ဝင်ရတယ်.. ပီးရင် တီဗီကို အကျယ်ကြီးဖွင့်ထားပီး.. အွန်လိုင်းပေါ်တက် ဂိမ်းဆော့ အာရိုက် ပွား တဂျောက်ဂျောက် ကီးဘုတ်ရိုက်သံနဲ့ ကျမနဲ့သာ ရှိနေခဲ့တယ်.. ပီးတော့ ဘာမှန်းမသိတဲ့ အရာတစ်ခုနဲ့…
ကျမက ညဘက်တွေ အိပ်ရင် မျက်စိနှစ်လုံး မဖွင့်နိုင်တော့တဲ့ အချိန်ကျမှသာ ကွန်ပျူတာကိုပိတ်ပီး အိပ်လေ့ရှိတော့ တချိုးတည်းအိပ်ပျော်သွားလေ့ရှိ်တယ်.. တချွတ်ချွတ် တဂျစ်ဂျစ် တရှပ်ရှပ်အသံတွေ ကြားလေ့ကြားထမရှိ.. ညကြီးမင်းကြီး တစ်ရေးနိုးလေ့မရှိ.. အိပ်မပျော်ရင်သာ မိုးအလင်းပေါက်ထိုင်ပီး ရုပ်ရှင်ထိုင်ကြည့်တတ်တာ.. အိပ်ရာပေါ်မှာ လှဲနေတဲ့တစ်ချိန်က ရှားရှားပါးပါး စာအုပ်ကလေးများ ရလာလို့ ဇိမ်နဲ့လှဲလျောင်းပီး ဖတ်တဲ့အခါမှသာ.. အိပ်မပျော်ဘဲ လှဲမနေတတ်တော့ အဲ့ဒီအသံတွေ ကြားရဖို့ အခွင့်မသာတာ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်.. ကြားရတော့လဲ ကျမက မကြောက်တတ်.. ကြည့်ဖူးတဲ့ ရုပ်ရှင်ကားထဲကလို ခြောက်တဲ့သရဲ သောက်ရှက်သာ ကွဲသွားမယ် ကျမကတော့ မကြောက်… ကျမ အခန်းကလေးနဲ့ ကျမက အကြောက်တရားတွေနဲ့ အတူတူရှိမနေခဲ့…
တစ်ညသားပေါ့.. ကျမ အခန်းရဲ့ဘေးဝရံတာနဲ့ဆက်ထားတဲ့ အခန်းတံခါးကို တဂျစ်ဂျစ်ကုတ်နေတဲ့ အသံကို ကျမ ကြားမိတယ်.. အိပ်မယ့်ဆဲဆဲ မီးတွေလဲ ပိတ်ပီးပီ.. စိတ်ထဲ ရုတ်တရက် တွေးလိုက်မိတယ် တကယ်လို့များ အဲ့ဒီ တဂျစ်ဂျစ်က သရဲဖြစ်နေရင်.. အဲ့သရဲက ငါ့ကို မျက်လုံးကြီး ပြူးပြ လျှာကြီးများထုတ်ပြလိုက်ရင်.. စိတ်ထဲမှာ တစ်ခုခုဆို လက်က ချက်ချင်းလုပ်တတ်တဲ့အကျင့်အရ လူက အိပ်ရာထဲကနေ ဆတ်ခနဲထပီး အခန်းတံခါးကို ဆွဲဖွင့်လိုက်တယ်..
ဗြုန်းဆို ဝုန်းခနဲ ထွက်ပြေးသွားတာက ကြောင်သုံးကောင်.. ခွီးခနဲ အော်သွားကြသေးတယ်.. အဲ့ဒီဝရံတာမှာ ကြောင်တွေ လာလာပီး စည်းဝေးတတ်ကြတယ်.. ဒါပေမဲ့ သူတို့က အသံတိတ်ဆွေးနွေးပွဲပဲ လုပ်လေ့ရှိတော့ ကြောင်သံမကြားရ.. မတော်တဆများ ကြောင်က ထွက်လဲ မပြေးဘူး အသံလဲ မထွက်ဘူးဆို.. စဉ်းစားကြည့်ပေါ့.. ညကြီးမှောင်မှောင် အမှောင်ထုထဲ ကိုယ့်ကို မျက်လုံးနီနီကြီး နှစ်လုံးက စိုက်ကြည့်နေ….တွေးရင်းတောင် ကျောချမ်းစရာ.. မကြောက်ရေးချ မကြောက်…
အလေ့အကျင့်တစ်ခုက အိမ်သာဝင်တိုင်း စာအုပ်ဖတ်လေ့ရှိတယ်.. ဇိမ်လေးနဲ့ စာအုပ်ဖတ်နေရင်း ရေချိုးကန်ထဲက ရေပန်းကနေ ရေတွေ တတောက်တောက်နဲ့ ကျလာလို့ မျက်စောင်း ထိုးပေးလိုက်တယ်..အေးအေးဆေးဆေး ငါ့ဘာသာ အိမ်သာမဝင်ရဘူး..နေရာတကာ ပါတယ်လို့လေ..
ကျမကို တစ်ယောက်တည်း မကြောက်ဘူးလား မေးရင် .. နည်းနည်းတော့ တွေဝေသွားပါတယ်.. ဟင့်အင်း မကြောက်ပါဘူး.. ညဘက်တွေ တစ်ယောက်တည်း အခန်းလေးကို ပြန်လာရတိုင်းလဲ ဘောင်းဘီအိတ်ထဲ လက်နှိုက်ပီး နီယွန်မီးတွေအောက်ကနေ ခပ်ဖြေးဖြေး လမ်းလျှောက်လာတတ်တာပါပဲ.. သီချင်းတောင် တိုးတိုးဆိုလိုက်သေးတယ်.. ဗလနဲ့တင် သရဲရော လူရော ကြောက်နေတယ် ထင်ရတာပါပဲ..
ပြောချင်တာကတော့ ကျမရယ် အခန်းကလေးရယ် အခန်းလေးထဲက ဘာမှန်း မသိတဲ့ အရာရယ် အခုတော့ ခွဲရပါတော့မယ်..ဒီအခန်းလေးကနေ ပြောင်းရပါတော့မယ်.. ပီးတော့ ရုံးတက်ရုံးဆင်း ကျောင်းတက်ကျောင်းဆင်း ပြန်လုပ်ရမှာ စိတ်ပျက်စရာ..
စိတ်ပျက်စရာတွေ တွေးမိပီး စိတ်ထဲမှာ ဝမ်းနည်းမိတာကတော့ ကျမရဲ့ဘေးမှာ အမြဲရှိနေပေးခဲ့တဲ့ ကျမကို ဒုက္ခမပေး ကြောက်စိတ်လဲ မပေးခဲ့ဖူးတဲ့ ကျမရဲ့ အခန်းကလေးနဲ့ ဝေးရမှာကိုပါပဲ.. ကဲ မမြစိမ်းတော့ ဒီလကုန် အသိုက်ပြောင်းရပါတော့မယ်.. ဘာပဲပြောပြော ညီအစ်မနှစ်ယောက် ချစ်သူတွေလို ချိန်းချိန်းတွေ့နေရတာကနေ အခုတော့ အတူတူ ပြန်နေရပါတော့မယ်..
အရင်ကဆို ရုံးက အဲ့ဒီအခန်းလေးမှာပဲ နေပီး မမဆုအခန်းကို ရံဖန်ရံခါမှ ပြန်ပါတယ်.. မမဆုဆီ သွားတဲ့အချိန်ကတော့ သူ ထမင်းနဲ့ဟင်းနဲ့ တူတူတန်တန် ချက်တဲ့အချိန်ရယ် မုန့်ချက်စားတဲ့အချိ်န်ပါ.. ဒါမှမဟုတ် ကိုယ်က အော်ဒါပေးပီး မှာတဲ့ အချိန်ပါ.. အသုပ်စားချင်တယ်.. မုန့်တီချက်ပါ.. မနက်ဖြန် မုန့်ဟင်းခါးချက်ထားပါ ဆိုတာမျိုးပေါ့.. အခုတော့ အတူတူနေပီး နေ့တိုင်း သူချက်ကျွေးတာချည်းပဲ စားရပါတော့မယ် .. ပီးတော့ ခန ခန ပွစိပွစိ စကားများရပါတော့မယ်.... ချစ်ရင်လဲ တဟီဟီနဲ့ချစ်နေကြပြီး.. ရန်ဖြစ်ရင် သူက ပွစိပွစိ.. ကျမက မြုံစိစိ.. ပီးတော့ သူကပဲ အလျှော့ပြန်ပေးရပါတော့မယ်..
ဒီလကုန်ရင်တော့ မမြစိမ်း အသိုက်ပြောင်းရပါတော့မယ်..
အသိုက်မပြောင်းခင် ကျမရဲ့ အခန်းကလေးထဲက မမြင်ရတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ကို သံယောဇဉ်ဖြစ်နေမိတာလေး သူသိအောင် ပြောပြချင်မိတယ်.. ဘာပဲပြောပြော ကျမကို အနှောင့်အယှက်မပေးဘဲ စောင့်ရှောက်ပေးခဲ့တာ ကျေးဇူးတင်တဲ့အကြောင်းလေးပါ.. မတော် သူက ရုပ်ပြလိုက်ရင်တော့ သေပီဆရာပါပဲ.. မျက်လုံးက နီနီ လျှာက တစ်တောင်လောက်များ ထုတ်ပြလိုက်ရင် ခုနက ချစ်နေတာလေးပျောက်ရုံမက ကျမ အသက်ပါ ပျောက်သွားမယ် ထင်တာပါပဲ.. အကောင်အထည်လိုက်တော့ ကျမလဲ ကြောက်တတ်ပါတယ်....
(၁၅-၅-၂၀၁၀၊ ၉း၀၂ pm)
at 6:25 AM Labels: အမှတ်တရ
purplemay May 15, 2010 at 7:32 AM
သူက ချစ်လက်စ အရှိန်လေးကုန်သွားမဆိုးလို့ ပြတော့ဘူးတဲ့....ခစ်ခစ်...။
ဒါပေမယ့် မပြောင်းခင် ရုပ်ရှင်ကြည့်ရင် မော်နီတာကို သူ့လည်းမြင်အောင်ပြပါတဲ့...။ မဟုတ်ရင်တော့လား...ဟင်းဟင်း..တဲ့...:P
မမစု ချက်တာတွေ နေ့တိုင်းစားရမယ့်ဘ၀တော့ အားကျတယ်...း)
jr May 15, 2010 at 8:54 AM
လိုက်လာမယ်။ သူလဲ အသိုက်လိုက်ပြောင်းမယ်ဆိုမှ ဟိုဘက်ကလူတွေ လန့်နေဦးမယ်။
မြစ်ကျိုးအင်း May 15, 2010 at 10:21 AM
ခင်သွားပြီဆိုရင်လည်း သူအသုံးမလိုတဲ့ ဖွက်ထားတဲ့ ရွှေတိုရွှေစလေးတွေပါ တောင်းလိုက်လေ
မခွဲနိင်လို့ မဆုမွန် နေတဲ့ဆီပါ လိုက်လာရင်တော့ ဒုက္ခနော်
အဲဒါဆိုရင် အိမ်ပေါ်က အနော် ပါ နှင်ချခံရမယ်ထင်တယ်း)
littlebrook May 16, 2010 at 11:06 AM
:) ငါ့လာခြောက်လို့ကတော့ ထိုင်ဆဲနေမှာ တစ်ညလုံး သရဲလုံးဝမအိပ်စေရဘူး :P
ထွေးငယ် May 17, 2010 at 8:37 AM
စလယ်ဆုံး...ဆွဲခေါ်သွားတယ် (အရေးအသားပြောပါတယ်) :D
စိတ်ဝင်တစား ရင်တဖိုဖိုနဲ့ ဖတ်သွားပါတယ်..
ပြီးတော့ ချီးကျူးသွားတယ်(နဲနဲပါးပါး) :D
ဖြူ June 19, 2010 at 9:17 PM
အိမ်ပြောင်းပြီးပြီလား အိမ်တက်ဘာကျွေးမှာလဲ.. မမြင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရော လိုက်ပို့သေးလား.. သူလဲတခါတည်းလိုက်ပြောင်းမယ်လို့ မပြောဘူးလား . အဟိ စိတ်ဝင်စားတယ် အဲ့ဒါကို